Somaliland oo casumaad u fidisay Nickolas Kay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland oo casumaad u fidisay Nickolas Kay
Mareeg.com: Wasiirka Arimaha dibadda maamulka Somaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in Xukumadda Somaliland martiqaad u fidaysay Wakiilka Qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nickolas Kay.
“Waa dhab oo waanu soo casuunay Nicholas Kay, waxaanan filayaa inuu yimaado Hargeysa bisha Augost ee soo socota 18- 19-keeda, marti qaad baanu u fidinay, Nicholas Kay 12-kii June ayaan London kula kulmay, waanu wada hadalnay” ayuu yiri wasiir Biixi.
“Nickolas Kay sida aad ula socotaan wuxuu UN-ka u qaabilsan yahay Hay’addaha, dhamaan Hay’addaha halkan joogaana isagay hoos yimaadaan, hadii ay yihiin Horumar, Xuquuqal Iisaan ama ha ahaato siyaasadde.” ayuu yiri Wasiir Maxamed Biixi Yoonis.
Wasiirka ayaa sheegay inaanay siyaasad la xiriirin waxyaabaha ay Nicholas Kay kala hadlayaan “Wax siyaasad la xidhiidha kala hadli mayno Nicholas Kay. Arimaha aanu kala hadlaynaa waa Arimo horumar ah, Gender-ka ku lug leh, Tababaro Booliska la siiyo, Askarta Jeelasha la siiyo, Markaa Arimo aanu xaq u leenahay, haddii aanu Somaliland nahay ayaanu doonaynaa inay wax nagala qabtaan” ayuu sheegay Wasiirku.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inaan wax dhibaato ah dhex jirin Somaliland iyo Qaramada Midoobay “Cilaaqaadka UN-ka iyo Somaliland wax dhibaato ah oo dhex taalaa ma jirto. UN-ku waa Hay’ad aanu u baahanahay inaanu la shaqayno, waxaanu goosanay inaanu soo dhawayno, oo soo marti qaadno, isna wuu naga ogolaaday inuu yimaado” ayuu yiri Wasiir Maxamed Biixi Yoonis.
Wasiirku waxa uu sheegay in Xukumad ahaan doonayaan Nickholas Kay xiriir fiican la yeesho Somaliland maadaama oo Nickolas Kay 90-kii cishaba mar Golaha Amaanka ee Qaqramada Midoobay uu warbixin u gudbiyo.
Somalia: Gov’t forces battle with Al Shabaab in Baidoa
Who Fund islamist shebab and Boko Haram